UmYalezo osuka kuSekela-Tshansela
Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa. Ndiyavuya ngokuthi ucinge ngokuza kufunda e-UCT (University of Cape Town), iziko elaziwa ngemfundiso nangemfundo ekudidi oluphezulu, kwanangokuzinikela ekuthatheni inxaxheba kwimiceli-mnge- ni yoluntu ngophando nangamanyathelo athathwa luluntu. I-UCT ibonelela ngeendidi ezipheleleyo zenkqubo zesidanga sokuqala nezilandela isidanga sokuqala kwii-faculty ezintandathu: i-Commerce, i-Engineering & the Built Environment, i-Health Sciences, i-Humanities, i-Law ne-Science. Iinkqubo zethu zesidanga ziyilwe ngononophelo ukuze kuqinisekiswe ukuba umfundi ngamnye ukulungele ngokupheleleyo ukumelana nemeko yokusebenza kwinkulungwane yama-21.
Nazi ezinye izizathu zokuba ukhethe ukufunda e-UCT. Okokuqala, uzakuba nethuba lokufumana isidanga esamkelwa kwamanye amazwe. Uninzi lwabafundi bethu abathweswe izidanga baye bafumane imisebenzi phambi kokuba bakulungele ukusebenza kwaye phantse bonke babanemisebenzi emva kweenyanga ezimbalwa bethweswe izidanga, ngaphandle kokuba banazizathu zithile ezibenza ukuba bangayingeni indawo yengqesho.
Okwesibini, sizakwazisa kubanye babaphandi kunye nabafundisi-ntsapho ababalaseleyo kwilizwe-jikelele. Umgangatho wemfundo yakho uhambelana ngqo nomgangatho wabasebenzi besebe abazakufundisa. E-UCT, abaphandi bomgangatho obalaseleyo bayafundisa, abafundisi- ntsapho bomgangatho obalaseleyo benza uphando, ukuze umsebenzi wemfundo ephakamileyo omtsha, izicwangciso zokufundisa kwakunye namava okwenziwayo abandakanywe kwikharityhulam.
Okwesithathu, sijolise ekulungiseleleni iinkokheli zobomi. Uzakufumana imfundo ephumela ngapha kwekharikyulam yegumbi lokufundela. E-UCT, uzakuba nethuba lokwandisa izakhono zakho zobunkokheli ngokuthath’inxaxheba kwimibutho, kwiiklabhu, kwiikomiti zeendawo zokuhlala zabafundi, kwiBhunga Elimele Abafundi (SRC) nakwiPalamente yabaFundi (Students Parliament).
Okwesine, sizakukulungiselela umsebenzi oquka ihlabathi jikelele. Sibumbela abafundi amathuba ukuzibandakanya namaqela abafundi ezizwe zehlabathi. Uzakufunda nabafundi abaphuma kwizizwe ezahlukeneyo ezingaphezu kwekhulu, kwaye uzakwakha ubuhlobo obutsha nobungenasiphelo. Kukho amathuba emfundo okufunda ngemiba yehlabathi jikelele. Kukwakho namathuba onokuwasebenzisa ufunda kwiyunivesithi yangaphesheya.
Okwesihlanu, ukukuxhasa, sinikeza ngoluhlu lweenkonzo zabafundi, kuquka iinkonzo nezibonelelo kubafundi abakhubazekileyo, inkonzo engempilo yabafundi (student wellness service), i-ofisi yonyango nothintelo lwe-HIV ne-Aids, kunye neyophuhliso/yolwandiso lwemisebenzi. Kukwakho nentlaninge yeeklabhu zemidlalo, imibutho yamasiko nezithethe kunye nemidlalo engezoluntu nokuhlala ukukuphuhlisa ngokupheleleyo kwanokukuqinisekisa ukuba wonwaba ngokupheleleyo. Sikwanalo noninzi lweenkqubo zenkxaso ukunceda abafundi abasuka kumakhaya ahlelelekileyo.
Siyaqonda ukuba imfundo ephakamileyo iyabiza kwaye ayihlawuleki kubaninzi. Sinikeza ngenkxaso-mali ukuqinisekisa ukuba nawuphi na umfundi uyagqwesa ngokwemfundo, nokuba uphuma kwikhaya elihluphekileyo okanye kwelityebileyo, uza kuba nakho ukufunda e-UCT.
Esi saziso sishicilelweyo siza kukunceda ukuba uphonononge iimfuno zezidanga ezahlukileyo, ukhetho ngenkxaso-mali, kwaye sinikeza ngolwazi olumalunga novavanyo lolwamkelo (admission testing), ngendawo yokuhlala kwakunye nezinye izinto. Ukuba usenayo imibuzo, nceda uqhakamshelane ne- ofisi yolwamkelo ye-UCT ukufumana uncedo.
Sinomdlawokutsalaabafundiabanetalente, abakhuthazekileyo, ingakumbi abafundi abanenkathalo ngoluntu nangendawo. Siyakukhuthaza ukuba ukhethe i-UCT. Izakutshintsha ubomi bakho!
Gq. Max Price